Imibuzo evame ukubuzwa - iSiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Kungani ukhetha inkampani yakho?
Okokuqala ngabantu. Siyiqembu elisebenza kahle kakhulu neqembu lonjiniyela abanolwazi kulo mkhakha. Umphathi wethu uthole iziqu zakhe e-UK okuletha le nkampani umbono omhlaba jikelele kunabanye abakhiqizi bombhoshongo. Okwesibili insizakalo, kulo mkhiqizo, umenzi namakhasimende kudingeka baxoxe ngemininingwane eminingi yezobuchwepheshe. Sihlala sibekezela ukubuza noma imuphi umbuzo futhi sinikeze izeluleko zethu zobuchwepheshe kumakhasimende. Okokugcina, siyazisa kakhulu ikhwalithi. Zonke izidingo zamakhasimende zizohlangabezana futhi sizibophezele ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni kuwo wonke amaklayenti ethu.
Intengo incike enhlobeni yemibhoshongo oyidingayo. Ngohlobo lombhoshongo ohlukile, impahla eluhlaza ingahluka futhi umsebenzi wokuqamba wohlobo oluthile lombhoshongo ungahle ube yinkimbinkimbi kunabanye. Kungakho sidinga ukubona umdwebo wamakhasimende bese unikeza ikhotheshini.
Kuthiwani uma ngingenawo umdwebo?
Uma amaklayenti engenawo umdwebo, singanikela ngezinhlobo eziningi zemibhoshongo ezenzelwe amaklayenti okufanele akhethwe. Ezimweni eziningi, singanikeza uhlobo olufanele lomdwebo wombhoshongo ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Uma ulayini wokudlulisa unzima, sisanikela ngenkonzo yokwakha kumakhasimende ethu.
yini i-oda eliphansi?
Asinayo i-oda eliphansi futhi samukela noma iyiphi i-oda evela kumakhasimende.
Ukukhiqizwa isikhathi esingakanani?
Imvamisa singenza ukuthunyelwa kokuqala ngenyanga eyodwa. Isikhathi sokukhiqiza sincike impela ukuthi udinga imibhoshongo emingaki.
Lude kangakanani usuku lokuthumela?
Isikhathi sokulethwa eYurophu, e-Afrika naseMelika izwekazi cishe izinsuku ezingama-40. Ukusho kwe-ASEN, isikhathi sokulethwa sicishe sibe yizinsuku ezingama-30. Ngokuvamile, isikhathi sokulethwa sizokuba ngaphezu kwenyanga eyodwa.
Ngabe iklayenti lingahlola imikhiqizo yalo ngaphambi kokuthunyelwa?
Yebo kunjalo. Iklayenti lingahlola imikhiqizo yabo nganoma yisiphi isikhathi abafuna ngaso. Empeleni, singamakhasimende amukelekile kakhulu ukuvakashela imboni yethu futhi sihlole imikhiqizo yabo ngaphambi kokuthunyelwa. Sizonikeza ngamakhasimende ama-3 indawo yokuhlala izinsuku ezintathu. Abaphathi bazoba nomhlangano namakhasimende asivakashelayo. Noma yikuphi ukuhlolwa kwemikhiqizo okudingeka iklayenti kuzothathwa.
Iyini inqubomgomo yakho yokuthengisa ngemuva?
Ngokuvamile, sizohlinzeka nganoma iyiphi insizakalo esingasiza ngayo amaklayenti kuze kube yilapho imibhoshongo ihlanganiswe kahle.
Imvamisa samukela i-T / T ne-L / C, i-30% ngaphambili.